Ndị na-emepụta ihe dị mkpa na Singapore ndị na-eme nchọpụta | AromaEasy
Ndị na-emepụta ihe dị mkpa na Singapore ndị na-eme nchọpụta | Na-azụ ahịa na ọnụahịa kachasị mma
Ndị na-emepụta mmanụ mkpa dị na Singapore
1 Banyere akara anyi
Dabere na uru akara dị elu, AromaEasy nwere ike iweta arịrịọ ahịa siri ike. Ọ na-enyekwa nkwado dị mma maka franchisees n'ịchọgharị ahịa.
Ruo ọtụtụ afọ, AromaEasy anọwo na-elekwasị anya n'ichepụta usoro nke ngwaahịa igwe.
Ngwaahịa nke ọ bụla agaala nyocha dị mma.
Ha dịkwa n'okpuru njikwa mma.
Shu tendril na -eme ka ngwaahịa ndị enyere ndị na-ere ahịa ga-abụ otu kachasị mma na ụlọ ọrụ aromatherapy.
2. Nkwado ngwaahịa
Usoro igwe aromatherapy ji eme AromaEasy enwego nke ha pụrụ iche.
Yabụ na ha nwere ike iche ọdịiche dị n'etiti onwe ha na ndị na - achọ ịlụ ya.
Na nkọwapụta, usoro ahaziri nke nwere ọtụtụ ụdị, gụnyere iko, seramiiki, osisi siri ike.
Ọzọkwa, ndị ahịa nwere ike inwere onwe ha ịhọrọ ngwaahịa dị iche iche nwere ọrụ pụrụ iche, dịka ultrasonic, ion kpo oku, teknụzụ mmiri abụọ.
N’ezie, emepụtara ma mepụta ngwa ahịa AromaEasy dị na ọkọlọtọ nke Europe, ebe mgbaru ọsọ dị na ahịa dị elu.
AromaEasy Mkpa mmanu mmanu mmanu
Dabere na ụdị ụtọ pụrụ iche, igwe Aromatherapy na-ewetara ndị mmadụ nkwukọrịta na ọkwa dị omimi site n'ịgbatị ha n'ọhụụ na ịnụ ihe na olfaction.
Site n'iji ísìsì ọma na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma, ndị ọbịa nwere ike ijere ndị ahịa ha ọrụ dị mma ma nwekwuo ọnụego ndị ahịa. Ọzọkwa, igwe aromatherapy dị mma maka ezinaụlọ, ime ụlọ nkwari akụ, ebe ndị mmadụ na-ama ụlọ, ebe ndị ọbịa, na ebe ndị ọzọ.
Site na ụda mmụba dị elu sitere na ngwa vibration nke ultrasonic, igwe aromatherapy na-emebi ụmụ irighiri mmiri ma gbazee mmanụ dị mkpa n'ime oke ikuku nano n'ọdịdị ikuku nke 0.1-5 μ m, wee zipụ ya na ikuku gbara ya gburugburu, na-eme ikuku. juputara na nsi.
Aromatherapy na-aghọ ụdị ejiji, ụdị ọdịnala, ma jiri nke nta nke nta bụrụ akara nke ndị mmadụ na-achọ ịnụ ụtọ dị elu.